မကြာမီ ဖွင့်လှစ်တော့မည့် Times City Coplexမှာ ဘယ်လိုအခွင့်အလမ်းတွေရရှိနိုင်မလဲ??? - Myanmar Builders Guide
All Categories 3rd Party Inspection Air Conditioning Aluminium Architect Banks [Govt.] Banks [Overseas] Banks [Private] Bath & Toilet Building Materials Carpets, Canvas & Linoleum Ceiling Cement Ceramics Civil and Structure Cleaning Cleaning Equipment Concrete Products Concrete [Ready-Mix] Concreting Equipment Condo Salesroom Construction Materials Construction Services Consultants [Construction] Contractor Crane Curtains Decoration Designers [Interior] Doors and Shutters Earthwork Electrical Goods Electronic & Electrical Home Appliance Electronics Fire Fighting Floor, Wall Formwork & Scaffolding Galvanized Iron Sheets Gas Pipe Installation Gates and Fence Generator & Transformer Geo-Engineering Glass Hardware Tools Heavy Equipment Home Furnitures Insulation Iron Kitchenware & Appliances Landscaping Legal Consultants Lifting Lifts & Escalators Lighting Lime Machinery Spare Parts Mechanical & Electrical Metal Door Moving Services Office Furnitures Office Use Painters Paints Parquet Personal Protective Equipment Piling Pipes & Accessories Plastic Plumbing Polish Project Management Property Management PVC Products Quantity Surveyor Real Estate Agents Refined Wood Roofs Sand, Brick & Aggregates Sandpaper Security Security & CCTV Sign Board Solar Energy Stainless Steelwares Steels and Metals Survey Survey Instruments Swimming Pool Tarmac Telecommunication Timber Tools Wallpapers Water System Water Tank Waterproofing Welding Well-Drilling Wire and Cable Wooden Product
မကြာမီ ဖွင့်လှစ်တော့မည့် Times City Coplex ကြီးတွင် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘဏ်ကြီးများ တစ်စုတစ်ဝေတည်း ဖွင့်လှစ်သွားမည့် Financial Center ၊ နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့အစည်းများ စုစည်းဖွင့်လှစ်မည့် International Commerce of Chambers Organization Center ၊ ဥပဒေဆိုင်ရာ
အကြံပေးအဖွဲ့အစည်းအတွက် Law Firm တို့ကို Times City Office Tower ၌ ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ရန် ငှားရမ်းလိုသော အဖွဲ့အစည်းများ အတွက် အထူးနှုန်း၊ အထူးခံစားခွင့်များဖြင့် ၀န်ဆောင်မှုများ ပေးနေပါသောကြောင့် ဟံသာဝတီလမ်းနှင့် ကျွန်းတောလမ်းကြားရှိ Time City Information Center သို့ စိတ်ပါဝင်စားသူများအနေဖြင့် သွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
<< ခေတ်အမီဆုံးနှင့် အကြီးဆုံး လက္ကားဈေးကြီးဖြစ်လာမည့် GMP MALL နှင့် Office Tower, Hotel များ ပါဝင်သော စီမံကိန်း>>
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ ဆုံမှတ်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် အကြီးမားဆုံးအခွင့်အရေး၊ တစ်နေရာတည်းတွင် ပြီးပြည့်စုံသည့်ဝန်ဆောင်မှုများဖြင့် ဈေးဝယ်သူများ၏ နံပါတ်တစ်ရွေးချယ်မှု ဖြစ်လာမည့် Times City Coplexကြီးရှိ ရုံးခန်း၊ ဆိုင်ခန်းများကို အထူးဈေးနှုန်းများဖြင့် ၀ယ်ယူငှားရမ်းနိုင်ရန် Information Center အား နေ့စဉ်နံနက် (၉း၀၀)နာရီမှ ညနေ (၅း၀၀)နာရီအထိ ဖွင့်လှစ်ထားပါကြောင်း သိရပါတယ်။
စိတ်ပါဝင်စားသူများအနေဖြင့် အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များနှင့် လါပ်စာများသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
လိပ်စာ - Times City ၊ ဟံသာဝတီလမ်းနှင့် ကျွန်းတောလမ်းထောင့်၊ ကမာရွတ်/ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုမြို့။
09- 765800800 , 09- 764800800 , 09 -5045777
website - http://www.timescity.com.mm
Facebook - Times City Yangon - Myanmar
Read 796 times	Last modified on Friday, 19 April 2019 11:25
ကနျဒျေါလာ သနျး ၄ဝဝ ရငျးနှီးမွှပျနှံထားသညျ့ စငျကာပူ-မွနျမာ-အိန်ဒိယသုံးနိုငျငံအကွား ရအေောကျကဘေယျ စတငျတညျဆောကျ
မွနျမာ-တရုတျရနေံနှငျ့သဘာဝဓာတျငှပေို့ကျလိုငျး စီမံကိနျးပိုကျလိုငျးတဈလြှောကျရှိ ဒသေဖှံ့ဖွိုး ရေးအတှကျ ကနျဒျေါလာ ၂၇ သနျးကြျောလှူဒါနျးထား
လာမညျ့လေးနှဈအတှငျး ကမ်ဘာ့ဘဏျက မွနျမာပွညျတှငျ ဖှံ့ဖွိုးရေးရနျပုံငှအေဖွဈ ကနျဒျေါလာ (၂) ဘီလီယံ အသုံးပွုရနျ လြာထား
ထိုငျးနှငျ့ မွနျမာတို့ ပူးပေါငျးထားသော Pro 1 Global လကျလီလုပျငနျးမှ ဆိုငျခှဲမြားတိုးခြဲ့ရနျ ကနျဒျေါလာ သနျး (၁၀၀) အထိ ရငျးနှီးမွှုပျနှံသှားမညျ